Topnepalnews.com | अलविदा पद्मरत्न तुलाधर ! को हुन् एमालेलाई सूर्य दिने तुलाधर ?
Posted on: November 04, 2018 | views: 3667
काठमाडौं । मानवअधिकारवादी पद्मरत्न तुलाधरको निधन भएको छ । केही दिनअघि नर्भिक अस्पतालमा भर्ना भएका तुलाधरको आइतबार दिउँसो उपचारका क्रममा निधन भएको हो । तुलाधरलाई अकास्मात हृदयघात भएपछि केही दिन अघि अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। ७८ वर्षीय तुलाधरको पौने एक बजे निधन भएको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ। तुलाधरका श्रीमती निलशोभा तुलाधर, दुई छोरीरदुई छोरा छन्।
को हुन् तुलाधर ?
तुलाधार पछिल्लो पटक २०५१ सालको आमनिर्वाचनमा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर ४ बाट प्रतिनिधि सभामा विजयी भएका हुनु भएको थियो । नेपाली राजनैतिक सामाजिक आन्दोलनका आगुवा मानिनुहुन्थ्यो । उहा ६२/६३ को शान्ति प्रक्रियाका एकजना सहजकर्ता पनि हुनुहुन्थ्यो । उहाको उपचारका क्रममा सरकारले बेवास्ता गरेको गुनासो तुलाधारका परिवारले गर्दै आएको थिए ।
२०४६ सालमा कांग्रेस र तत्कालीन वाममोर्चालाई एक ठाउँमा ल्याउन उहाको महत्वपूर्ण भूमिका थियो। नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना गर्ने अभियानमा लामो समय खर्चिएका तुलाधर २०४२ मा नेकपा (माले)को समर्थनमा राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यमा उठाइएपछि चर्चाको शिखरमा पुग्नु भएको थियो ।
तुलाधरका नेपाल भाषामा थुप्रै नाटक (ख्यालः), निबन्ध आदि गरी १६ पुस्तक प्रकाशित छन्।
स्वर्गीय तुलाधर मानवअधिकारवादी तथा वामपन्थी नेता हुन् । तुलाधरसँग ‘नेपाल भाषा’ पत्रिकाका सम्पादक भई लामो समयसम्म पत्रकारिता गरेको पनि अनुभव छ । त्यस्तै नेपाल संवतलाई राष्ट्रिय संवत् तथा शङ्खधर साख्वालाई राष्ट्रिय विभूति घोषणाको मान्यता दिलाउन पनि उनले सङ्घर्ष गरे । र, सफल भए ।
उनका नेपाल भाषामा थुप्रै नाटक (ख्यालः), निबन्ध आदि गरी १६ पुस्तक प्रकाशित छन् । नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापना गर्ने अभियानमा आफनो जीवनको लामो समय खर्चिएका तुलाधर वि.सं २०४२ मा नेकपा (माले)को समर्थनमा राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यमा उठाइएपछि चर्चाको शिखरमा पुगेका थिए । उनी राष्ट्रिय पञ्चायतमा बहुदल माग गर्दै आन्दोलन गर्ने नेताका रूपमा चिनिन्छन् । तुलाधर २०४३ सालको राष्ट्रिय पञ्चायत निर्वाचनमा पहिलोपटक भाग लिएका थिए । काठमाडौंबाट तुलाधरजस्तै झापाबाट द्रोणचार्य क्षेत्री, मकवानपुरबाट रुपचन्द्र विष्ट, चितवनबाट जागृतप्रसाद भेटवाललगायतले निर्वाचन जितेका थिए ।
तत्कालीन नेकपा एमालेको समर्थनमा वि.सं २०४८ र विस २०५१ मा काठमाडौँबाट प्रतिनिधिसभाको सदस्यमा निर्वाचित तुलाधर एमाले सरकारको पालामा वि.सं २०५१ मा श्रम तथा स्वास्थ्यमन्त्री भएका थिए । राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्यका लागि त्यसबेला जनपक्षीय उम्मेदवार हुँदा सूर्य चिह्न लिएका तुलाधरकै सूर्य चिह्न तत्कालीन नेकपा(एमाले) र हाल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले लिएको छ ।
तुलाधरले तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) लाई शान्ति वार्तामा ल्याउने सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेका थिए । काठमाडौंका रैथाने तुलाधर चालीसको दशकअघि भाषिक अधिकारकर्मीका रुपमा परिचित थिए । पछि एमाले नजिक भए । त्यसपछि माओवादीनिकट भनेर चिनिए । त्यससँगै उनले पहिचानवादी आन्दोलनका अभियन्ताको दह्रिलो पहिचान बनाए ।
नेपालमा मदन भण्डारीपछि भाषण कला भएका नेताका रुपमा पनि तुलाधर परिचित थिए । यद्यपी, भाषणकै कारण उनी स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा ०५१ सलामा विवादमा मुछिएका थिए । निकै चर्को भाषण गर्ने तुलाधार भाषणकै क्रममा पटक–पटक भावुक पनि बन्थे । यति भावुक कि, कतिपय बेलामा उनी भाषण गर्दागर्दै रोइदिन्थे ।
उनलाई भाषणका वक्ताका रुपमा ठाउँ ठाउँ बोलाइन्थ्यो । ०४८ सालमा मनमोहन अधिकारी, मदन भण्डारी, साहना प्रधान, केपी शर्मा ओली र उपनिर्वाचनमा विद्या भण्डारीको निर्वाचन क्षेत्रमा गएर तुलाधरले भाषण गरेका थिए । ओलीलाई जिताउन झापाको दमकमा गएर पनि भाषण गरेका थिए ।
तुलाधरले २०४३ सालको निर्वाचनमा पञ्चायत सरकारका गृहमन्त्रीसमेत रहेका जोगमेहर श्रेष्ठलाई हराएका थिए । सूर्य चिन्ह लिएर राष्ट्रिय पञ्चायतमा उठेका तुलाधरलाई वामपन्थी र प्रजातन्त्रवादीहरुको समर्थन थियो । बहुदलकालमा उनी मानवअधिकारवादी र २०६२/६३ को आन्दोलनताका उनी नागरिक समाजको अगुवाका रूपमा परिचित थिए । २०६३/६४ पछि उनी पहिचानको आन्दोलनमा सक्रिय थिए ।